Hordhac: Man City vs Crystal Palace – Pep Guardiola Oo Booska 2aad Sii Xejisan Karaya, Shaxaha Macquulka ah Iyo Xogta Kulanka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Hordhac: Man City vs Crystal Palace – Pep Guardiola Oo Booska 2aad...
Manchester City waxay martigelinaysaa Crystal Palace iyadoo doonaysa in guushii lixaad oo xidhiidh ah ee dhamaan tartamada ay soo hoysto marka ay garoonka Etihad Stadium kusoo dhoweyso Palace.
Kooxda Guardiola oo usbuucii hore soo gashay kaalinta labaad iyadoo ka faa’iidaysatay Leicester City oo guul-darraysatay, ayaa waxay dagaal u geli doontaa in ay maanta guul ka keenaan kulanka ay ku martgelinayaan Crystal Palace si farqiga 14-ka dhibcood ah ee Liverpool ay ka horreyso aanay usii dheeraanin, amaba usoo yaraan karo marka ay Reds Axadda la dheesho Manchester United.
Inkasta oo ciyaarteedii ugu wacnayd ay Manchester City soo bandhigtay kulankii Aston Villa ay ku xasuuqday 6-1, haddana xilli ciyaareedkan waxay aad uga hoosaysaa halkii laga filayey marka la eego tayada ciyaaryahannada ay haysato iyo sidii ay u dheelayeen labadii fasal ciyaareed ee hore.
Tababare Pep Guardiola waxa uu ogyahay inuu u baahan yahay inuu guuleysto dhamaan 16-ka ciyaarood ee ka hadhsan fasal ciyaareedkan, haddii ay taasi dhici weydana waxa uu fursad weyn siinayaa Jurgen Klopp oo haddaba 14 dhibcood ka horreeya ciyaar baaqi ahna haysta, kaas oo dhamaadka bisha hoggaanka ku qaban kara 17 dhibcood oo nadiif ah.
Ciyaartii hore ee City iyo Crystal Palace, waxa 2-0 ku adkaatay kooxda Guardiola, laakiin xili ciyaareedkan waxay hore ula soo kulmeen laba khasaare oo kaga yimid Wolves iyo Manchester United oo garoonkooda Emirates ku garaacay, taasina waxay meesha ka saaraysaa kalsoonidii tababaraha reer Spain uu ku qabay kooxdiisa marka ay garoonkooda joogaan.
Previous articleIn ka badan 10 ruux oo ku dhaawacmay Qarax lagu weeraray Guri ku yaalla Muqdisho
Next articleSideed Ruux oo la dhigay Isbitaal kadib markii ay ku Sumoobeen Caano